Itrone kaZeus II - I-Airbnb
Itrone kaZeus II
Igumbi elise- indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguVasilis
I-Cottage inika iimbono ezintle ze-S.Georges bay ende. Iyadi enkulu enokufikelela kunxweme olukwanti kunye namagumbi ama-6 umntu ngamnye aliphupha kwiintsapho nakwizibini ngokufanayo. Isakhiwo sakhiwa ngo-2008 kwaye sahonjiswa ngendlela eNtsha yakudala, iL
There is a free parking in our place , just passing the church of afionas on your let 100m
Sinikezela ngesidlo sakusasa kwindawo yokutyela ekufutshane ngexabiso elikhethekileyo kwiindwendwe zethu kwaye ungaqesha imoto yakho kuthi. Sikwalungiselela ukuhanjiswa kwakho ukusuka kunye ukuya kwisikhululo seenqwelomoya okanye izibuko.
Ezinye izinto e…
4.83 (iingxelo zokuhlola 46)
Indawo yethu yeyona ndawo ikufutshane kunxweme oludumileyo lwePorto timoni(10mnutes uhamba ukusuka apha)
Ndiyavuya ukukunceda ngayo nayiphi na indlela ebusuku okanye emini
Inombolo yomthetho: 0829K121K7864001